Archdiocese of Mandalay blog: 2012
လာမယ့်နှစ်သစ်မှာ တစ်နေ့ပြီး တစ်နေ့ ဘာမှ Programme အစီအစဉ် မရှိဘဲ ရွေ့လျားနေမယ့် အစား တစ်နှစ်လုံး အတွက် ဘာလုပ်ရမယ်၊ ဘာကို ဦးတည်ပြီး ဘာဆွတ်ခူးမယ် ဆိုတဲ့ စီမံကိန်း တစ်ခုခုချ မှတ်ထားပြီး မျက်ခြည် မပြတ်လုပ်ကိုင် သွားရင် ကျေနပ်မှု ရမှာမလွဲပါ။
၀ိညာဉ် ဘက်မှာလဲ ဒီနှစ်အတွင်း ဒီပါရမီကို ငါ အထူး ဆည်းပူးဆောက်တည် ရမယ်။ ဒီ မကြာခဏ ငါကျူးလွန်နေတဲ့ အပြစ် အမှားကို ငါ ပိုအောင်မြင်ရမယ် ဆိုပြီး ဘုရား အကူအညီတောင်းရင်း ကြိုးစား သွားရင် တစ်နေ့ တလှမ်း မတိုးတက်ပဲ မနေနိုင်ပါ။ ခရစ်တော်ဟာ ကျွန်ုပ်တို့ လူသားများကို ချစ်လွန်းလို့၊ ယုံကြည် အားကိုးလွန်းလို့ လွယ်ကူတဲ့ လမ်းကို မလျှောက်လှမ်း စေလို၊ တောင်တက်ရတဲ့ ကရာနီရှေ့လမ်း ကို ကမ်းလှမ်းနေပါတယ်။ ဆူးခင်းတဲ့ လမ်းဖြစ်ပေမယ့် မိမိ နောက်လိုက်များဟာ သူရှေ့ တစ်ဦးတည်းသာ ရုန်းကန်နေရသည် မဟုတ်၊ ကိုယ်တော်နှင့် အတူ ပါဝင် ဆင်နွှဲ နေကြတယ် ဆိုတာ ပြောကြားထားတယ်။
ကျွန်ုပ်ရှေ့ အရင် ဒုက္ခ အခက်အခဲ အမျိုးမျိုးကို သာမက နာကျင် လှတဲ့ဝေဒနာ ဖက်တဲ့ သေခြင်းမျိုးကို လက်ခံခဲ့တဲ့ ခရစ် တော်နှင့် ဆိုရင် ဒုက္ခ ဆင်းရဲဟာ ဆူးငြှောင့် ခလုတ် မဟုတ်တော့ပဲ ပန်းတိုင်၊ ခရစ်တော်နှင့်လျှောက်သော သူသည် မိမိ ခန္ဓာ ကိုယ်ဆုံး ရှုံးလျှင် ဆုံးရှုံးလိမ့်မည်။ သို့ သော် သီလ ပါရမီ မဆုံးရှုံးရာ။ ခရစ်တော်နှင့် ဘ၀ကို အတူ ရုန်းကန်သော သူသည် မိမိ အသက် ဆုံးကောင်းဆုံး လိမ့်မည်။ သို့သော် ဘယ်သောအခါမှ မိမိအသက် ၀ိညာဉ် မဆုံးရှုံးနိုင်ပါ။ ခရစ်တော်ကို မျက်ခြည် အပြတ် မခံသော ပုဂ္ဂိုလ်သည် ကားတိုင်တော်၏ အမှောင်ရိပ်ကို ထိုးဖောက်ပြီး ရှင်ပြန် ထမြောက်ခြင်း အာရုံချိန်၏ ရောင်ခြည်ကို မြင်နေရ၏။ ဒါဝိဒ်မင်းကြီးဟာ ရန်သူ ဖိလိတ္တိတို့ရဲ့ အန္တရာယ်နှင့် ရင်ဆိုင်ရချိန် ဘုရားသခင်ကို အားကိုး အားထားခဲ့တဲ့မေတ္တာကို ဆာလံကျမ်း ၅၆ မှာ ဖတ်ရှုကြပါစို့။
ညှင်းပန်းနှိပ်စက်မှုအောက်တွင် ဘုရားသခင်ကို ယုံကြည်အားကိုးခြင်း
အို ဘုရားသခင်၊ တပည့်တော်ကို သနားတော်မူပါ။ အကြောင်းမူကား၊ လူတို့သည် တပည့်တော်နောက်သို့ အပြင်း အထန်လိုက်၍ တစ်နေ့လုံး တပည့်တော်ကို အနိုင်အထက် တိုက်ခိုက်ကြပါ၏။ တပည့်တော်၏ အသရေဖျက်သူများသည် တပည့်တော် နောက်သို့ တစ်နေ့လုံးလိုက်၍၊ အများကပင် မာန ထောင်လွှားလျှက် တပည့်တော်ကို တိုက်ခိုက်ကြပါ၏။ တပည့် တော်သည် ကြောက်လန့်သော အခါ၊ ကိုယ်တော်ကို ယုံကြည် အားထားပါမည်။ ငါ ချီးမွမ်းထောမနာပြုသော ကတိတော်ရှင် ထာဝရဘုရားကို ငါ ယုံကြည်အားထား ပါ၏။ ငါသည် ကြောက်လန့်လိမ့်မည် မဟုတ်။ သေ မျိုးဖြစ်သောသူသည် ငါ့ကို မည်သို့ပြုနိုင် မည်နည်း။ သူတို့သည် ငါ၏ စကားများကို လိမ်လည် လှည့်ပတ်၍၊ ပြောဆိုကြ၏။ ငါ့ကို အန္တရာယ်ပြုရန် အမြဲကြံစည် နေကြ၏။ သူတို့သည် ပူးပေါင်းကြံစည်ကြပြီး၊ ငါ၏
ခြေလှမ်းများ ကိုချောင်းမြောင်းနေကြ၏။ ငါ၏အသက်ကို သတ်လိုစိတ် ပြင်းပြနေကြ၏။ ထိုသူတို့ကို မည် သည့် အကြောင်းပြချက်နှင့်မျှ လွတ်မြောက်စေတော် မမူပါနှင့်။ အိုဘုရားသခင် ကိုယ်တော်၏အမျက်တော် ၌ လူမျိုးတကာတို့ကို အရေးနိမ့်စေတော်မူပါ။ တပည့်တော်၏ ငိုကြွေးမြည်တမ်းသံကို မှတ်တမ်းတင် တော်မူပါ။ တပည့်တော်၏ မျက်ရည်များကို ကိုယ် တော်၏ ပေရွက်လိပ်ပေါ်တွင် စာရင်းပြုတော်မူပါ။ ထိုမျက်ရည်များ သည် ကိုယ်တော်၏ မှတ်တမ်းတွင် ရှိသည် မဟုတ်ပါလော။ ကယ်တော်မူပါရန် ငါတောင်း လျှောက်သောအခါ ငါ၏ ရန်သူများသည် လှည့်ပြေး ကြရလိမ့်မည်။ ဤအချက်အားဖြင့် ဘုရားသခင်သည် ငါ့ဘက်၌ ရှိသည်ကို ငါသိရလိမ့်မည်။ ငါချီးမွမ်း ထောမနာပြုသော ကတိတော်ရှင် ဘုရားသခင်၊ ငါချီး မွမ်းထောမနာပြုသော ကတိတော်ရှင် ထာဝရဘုရား။ ထိုဘုရားသခင်ကို ငါယုံကြည် အားကိုးပါ၏။ ငါ သည် ကြောက်လန့်လိမ့်မည်မဟုတ်။ လူသည် ငါ့ကို မည်သို့ပြုနိုင်မည်နည်း။ အိုဘုရားသခင် တပည့်တော် သည် ကိုယ်တော်ထံ ကတိသစ္စာပြုထားသူဖြစ်ပါ၏။ တပည့်တော်သည် ကျေးဇူးတော် ချီးမွမ်းရာ ယဇ်ကို ကိုယ်တော်အား ဆက်ကပ်အပ်နှံပါမည်။ အကြောင်း မူကား၊ ကိုယ်တော်သည် တပည့်တော်၏ ၀ိညာဉ်ကို သေခြင်းမှလည်းကောင်း၊ တပည့်တော်၏ခြေကိုချော် လဲခြင်းမှ လည်းကောင်း ကယ်တင်တော်မူ ခဲ့လေပြီ။ ဤနည်းဖြင့် တပည့်တော်သည် ဘုရားသခင်၏ရှေ့ တော်ဝယ် အသက်၏ အလင်းတော်၌ လျှောက်လှမ်း နိုင်ပေလိမ့်မည်။
Posted by Archdiocese Of Mandalay Blog at 5:15 AM
ငြိမ်သက်လို့ . . .
ဖြေဖျောက်လို့ . . .
ကူးပြောင်းလို့ . . .
Posted by Archdiocese Of Mandalay Blog at 9:58 PM
လူ့ဖြစ်ယူကာ မွေးဖွါးလာပြီ .....
ချစ်သခင်လေး စောင့်လို့နေမှာ။ ။
Posted by Archdiocese Of Mandalay Blog at 3:56 PM
Posted by Archdiocese Of Mandalay Blog at 3:32 AM
ကျွန်တော် ငယ်စဉ်က အဖေသည် ကျွန်တော်အား မမေ့နိုင်သော စကားတစ်ခွန်း ကိုပြောခဲ့သည်မှာ - သား မင်းကိုမွေးစဉ် က၊ ကမ္ဘာလောကကြီး ၀မ်းမြောက် ရွှင်လန်းနေစဉ် မင်းဟာ ငိုနေခဲ့တယ်။ သေသောအချိန် မင်း ၀မ်းရွှင်လန်းနေစဉ် ကမ္ဘာလောကကြီး ငိုကြွေနေရအောင် မင်းရဲ့ ဘ၀မှာနေထိုင်ပါ ဟူ၍ဖြစ်သည်။ ကျွုန်ုပ်တို့သည် ဘ၀ဆိုတာ ဘာလဲဆိုတာမေ့နေသည့်ခေတ် ကာလတွင်နေထိုင်နေကြသည်။ လူတစ်ယောက်ကို လကမ္ဘာသို့ လွယ်ကူစွာ ပို့ဆောင်နိုင်သောလည်း လမ်းကိုဖြတ်၍ မိတ်ဆွေ တစ်ယောက်ကိုတွေ့ရန် အခက်အခဲတွေ့နေကြသည်။
မိုင်ထောင်ပေါင်းများစွာ အကွာအဝေးတွင် ရှိသော အလွန်သေးငယ်သည် ပစ်မှတ်ကို မစ်ဆိုင်း ဒုံးကျည်ဖြင့် မလွဲအောင် ပစ်ခတ်နိုင်သော်လည်း၊ မိမိ အိမ်မှာရှိသော ကလေးများနှုင့် စာကြည့်တိုက်သို့ သွားရန် ရက်သတ်မှတ်၍ မရဘဲဖြစ်နေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင် အီးမေးလ်၊ ဖက်စ်၊ ဒီဂျစ်တယ်ဖုံးနှင့် အမြဲ ဆက်သွယ်နိုင်ကြသော်လည်း၊ တစ်ဦးနှင့် တစ်ဦး ဆက်ဆံမှု နည်းပါးသော အချိန်ကာလ တွင်နေထိုင် ကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် လူများနှင့် ထိတွေ့မှု မရှိကြ။ ရည်ရွယ်ချက်များပျောက်နေ ကြသည်။ မည်သည် အရာသည် အရေးကြီးဆုံးဖြစ်သည်ကိုမေ့လျော့နေကြသည်။
သင် ဤစာအုပ်ကို စတင်ဖတ်သော အချိန်မှာပင် ကျွန်ုပ် သင့်အားလေးစားစွားမေးပါမည်။ သင်သေသောအခါ မည်သူ ငိုမည်နည်း။ ဤ ကမ္ဘာမြေပေါ်တွင် အသက်ရှင်သန်ခွင့် ရစဉ်၌ လူသားပေါင်း မည်မျှနှင့် သင် ထိတွေ့မည်နည်း။ နောင်လာမည့် မျိုးဆက်သစ် အား သင့်ဘ၀က မည်သို့သော အရှိန်အ၀ါ ကိုပေးမည်နည်း။
သင်၏နောက်ဆုံး ထွက်သက်နောက်တွင် မည်သည့် အမွေအနှစ်ကို ချန်ထား ခဲ့မည်နည်း။ ကျွန်ုပ်၏ ဘ၀တွင် ကိုယ်တိုင် သင်ယူခဲ့သော သင်ခန်းစာမှာ ဘ၀ကို သင်က မပြုလျှင် ဘ၀ပြု သမျှ သင်နုရ လိမ့်မည်။ နေ့ရက်များသည် ရက်သတ္တပတ်များသို့၊ ရက်သတ္တပတ်များသည် လများသို့၊ လများသည်နှစ်များသို့ လျင် မြန်စွာ ကူးပြောင်း သွားကြသည်။ ဘ၀တွင် တ၀က် တစ်ပျက်နေထိုင်ခဲ့သောကြောင့် မကြာမီ မည်သည့်အရာမျှ မကျန်တော့ဘဲ နောင်တဖြင့်ကြေကွဲနေသောနှလုံးသားသာ ကျန်ရှိပေမည်။ သင့်ဘ၀တွင်ပြန်လည်နေထိုင် ခွင့်ရလျှင် သင် ဘာလုပ်မည်နည်း ဟု အိပ်ရာထဲတွင် လဲနေသော စာရေးဆရာကြီးဂျောခ်ျဘားနန်ရှောအားမေးရာ သူက စဉ်းစား၍ ““ငါဖြစ်ချင်သော ပုဂ္ဂိုလ်မျိုး ငါဖြစ် နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ငါမဖြစ်ခဲ့ဘူး”” ဟု သက်ပြင်း ချလျက်ပြန်ဖြေခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ် ဤစာအုပ်ရေးသားခြင်းသည် သင် ဤကဲ့သို့ မဖြစ်စေရန်ဖြစ်သည်။
ဤသို့ အစပြုသည်နှင့် သင့်ဘ၀လည်းပြောင်းလဲ သွားလိမ့်မည်။
Who Will cry when you die? စာအုပ်မှ Discover your callingကိုပြန်ဆိုသည်။
Posted by Archdiocese Of Mandalay Blog at 5:17 AM
အချင်းချင်း လက်ဆက်သွားစို့ မနှေး
Posted by Archdiocese Of Mandalay Blog at 6:22 AM
လက်ထဲကငွေကိုရေတွက် ကြည့်လိုက် တော့ ငါးရာ အတိပင်။ ဒီနေ့ . . . တစ်နယ်စီခြားနေသော ချစ်သူဆီသို့ ဖုန်းဆက်ရမည့်နေ့ တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်း ဖုန်းဆက်မည်ဟု ကတိပေးထား၏၊ ဖုန်းမဆက်လျှင် ချစ်သူ စိတ်ကောက်မည်၊ စိတ်ကောက်လျှင်သူ မချော့တတ်၊ ချစ်သူ စိတ်ဆိုးမှာကို အလွန်ကြောက်လေ သည်။
ဖုန်းဆက်ဖို့ အတွက် သူပျက်ကွက်ခဲ့တာ တစ်လကျော်နေပြီ၊ ပျက်ကွက်ရသည့် အကြောင်းရင်းမှာလည်း ထူးဆန်းလွန်း လှသည်။ တစ်ခုသော တနင်္ဂနွေ ချစ်သူဆီကို ဖုန်းဆက်ဖို့ထွက် အလာ . . . လမ်းတွင် အဖိုးအို တစ်ယောက်ကို ဆိုင်ကယ်တစ်စီးမှ ၀င်တိုက် သွားလေသည်။ ဆိုင်ကယ်မောင်းသည့်သူမှာ အဖိုးအိုကို လှည့်ပင် မကြည့်ပဲ မောင်းပြေး သွားလေသည်။ ထို အဖြစ်အပျက်သည် သူ၏ရှေ့တွင်ဖြစ်ပျက် ခဲ့၏။ သူလည်း မနေသာပဲ ဆေးရုံကို ပို့ပေး ခဲ့ရ၏။ ပါလာသမျှ ငွေလည်း ကုန်သွားသည်။ ဆင်းရဲနွမ်းပါးတဲ့ အဖိုးအို အတွက် သွေးတစ်လုံးပင် လှူခဲ့ရ၏။ အဲ့ဒီ တနင်္ဂနွေ ဖုန်း မဆက်ဖြစ်၊ တနင်္ဂနွေ တစ်ရက်သာလျှင် အလုပ်နား ရသည့် ချစ်သူ သူ့ဖုန်းကိုမျှော်နေမှာ အသေအချာ ပင်။
နောက်တစ်ကြိမ် တနင်္ဂနွေ အမေ မူးလဲသွား၏ တစ်မိသားစုလုံး ပျာယာ ခတ်ကုန်၏။ သူလည်း ဆရာဝန်ပြေးခေါ်ရ၊ ဆေးပြေး ၀ယ်ရနှင့် တစ်နေ့လုံးလိုလို အ မေ့ဘေးက မခွာရ၊ အမေတစ်ခုခုဖြစ်မှာ စိတ်ထဲတွင် ပူပန်နေရ၏။ ချစ်သူကို ဖုန်းဆက်ဖို့ သတိရလိုက်သေးသည်၊ ဘယ်လိုမှ အချိန်မရ၊ ဒီလိုနှင့် တနင်္ဂနွေကျော် သွားပြန်သည်။
တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်း ချစ်သူဆီ ဖုန်းဆက်ရန်မှာ အကြောင်းအမျိုးမျိုးနှင့် အမြဲတမ်း အလွဲလွဲအချော် ချော်၊ ငွေမရှိတာနှင့်၊ အရေးပေါ် အကြောင်းတရားများ ပေါ်လာရတာနှင့် ဖုန်းမဆက်ဖြစ်ခဲ့တာ တစ်လတောင် ကျော် ခဲ့ပြီ။ အစစအရာရာ မပြည့်စုံသော မိမိကို မှရွေးချယ် ချစ်ခဲ့သော ချစ်သူကိုကျေးဇူးလည်း တင်၏၊ သနားလည်း သနား မိလေသည်။ ချစ်သူကိုတောင်းပန် ရမည်၊ လွဲချော်ခဲ့သော တနင်္ဂနွေနေ့များ အ ကြောင်း ကိုတော့ မရှင်းပြလိုပေ။ ချစ်သူ အထင်သေးမှာ စိုးသလို၊ စိတ်ပျက် သွားမှာကိုလည်း စိုးရိမ်နေမိ၏။
“ဒီတစ်ပါတ် တနင်္ဂနွေ ၁၀နာရီ မှ ၁၁နာရီ အတွင်း ဖုန်းမဆက်လျှင် အပြတ်ပဲ” ဟု ချစ်သူက လူကြုံ နှင့် စာပေးလိုက်သည်။ သူနာရီကို ကြည့်လိုက်သည် ၁၁နာရီထိုးဖို့ ၁၅မိနစ် လိုသေး၏။ တစ်မနက်လုံးလည်း မအား၊ အမေ့ ကျန်းမာရေး မကောင်းသောကြောင့် အ မေ့အလုပ်တွေ ကူလုပ်ပေးနေရသည်။ ချစ်သူ စိတ်ကို သူသိ၏၊ ဖုန်းဆက် မှဖြစ်မည်။
သူသည် စိတ်ကို ဒုန်းဒုန်ချကာ ဖုန်းဆိုင်ထဲသို့ ၀င်ရန်ခြေလှမ်းပြင် လိုက်သည်။ ထိုအချိန်မှာပင် အိမ်မှ ထွက်လာခါနီး အမေမှာ လိုက်သော စကားများကို ကြား ယောင်မိလေသည်။
“သားမှာ ပိုက်ဆံ ငါးရာလောက်ရှိရင် အမေ့ အတွက် သွေးပေါင်ကျဆေး တစ်ကဒ်လောက် ၀ယ်ခဲ့ပါ နော်၊ အမေသွေးတွေ အရမ်းတိုးနေလို့ သားရဲ့” ဖုန်းဆိုင်သို့ ၀င်မည့် သူ့ခြေလှမ်းများ ရပ်တန့်သွား၏။ ဖုန်း ဆိုင်၏ဘေးတွင် ဆေးဆိုင် ရှိလေသည်။
ဖုန်းဆိုင်၊ ဆေးဆိုင်၊ လက်မှ ပတ်ထားသော နာရီနှင့်ငွေကို တစ်လှည့်စီ ကြည့်ရင်း တွေဝေနေ၏။ ၁၁ နာရီ ထိုးဖို့ ငါးမိနစ် အလိုတွင် သူသည် ဆိုင်ထဲသို့ ၀င်သွားလေသည်။
ဆိုင်ထဲမှပြန်ထွက်လာသော အခါ . . . သူ၏ နှုတ်ခမ်းများသည် ပီတိ အဟုန်ကြောင့် ပြုံးရောင်သန်း နေ၏ . . . သို့သော် သူ၏ မျက်ဝန်းမှာတော့ မျက်ရည်စများပြည့်လျှံကာ ပါးပြင်ပေါ်သို့ မျက်ရည် စက်လေးများ စီးကျနေ၏။ သူ၏ လက်ထဲမှာတော့ ဆေးကဒ်လေး တစ်ကဒ်အား ကျစ်ကျစ် ပါအောင် ဆုပ်ကိုင် ထားလေ တော့သည်။
Posted by Archdiocese Of Mandalay Blog at 4:09 PM
ယနေ့ ကမ္ဘာ့ သတင်းမီဒီယာများ စိတ်အ၀င်စားဆုံးသတင်းမှာ ဆီးရီးယားနိုင်ငံ၏ အရေးအခင်း ပင် ဖြစ်ပါသည်။ ယခင်က ဆရာဝန် တစ်ဦးဖြစ်ပြီး အသက်ငယ်ငယ်နှင့် ဖခင်သမ္မတကြီး အာဆတ်၏ အရိုက်အရာကို ဆက်ခံခဲ့သူ ဘာရှာ အယ်လ် အာဆတ်သည် (Bashar-Al-Assad) ယခုအခါ အာဏာရှင် ဆန်စွာ တိုင်းသူပြည်သားများကို ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်စွာ ဆက်ဆံခဲ့သောကြောင့် ကမ္ဘာ့ သတင်း မျက်နှာပြင်၌ နာမည်ဆိုးနှင့်ကျော်ကြား ခဲ့ရသည်။ အယ်(စ)မာအာဆတ်သည် ဆီးရီးယားသမ္မတ ဘာရှာ အာဆတ်၏ ရှုမငြီးသည့် ချောမော တင့်တယ်သော ဇနီးသည်လေး ဖြစ်ပါသည်။ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံခေါင်းဆောင်များ၏ ဇနီးများထဲ၌လည်း အသက်အငယ်ဆုံး သမ္မတကတော် တစ်ဦး ဖြစ်ပါသည်။ အယ်(စ)မာ (Asma)သည်၊ အနောက် သတင်းမီဒီယာများမှ စိတ်ဝင်တစားသတင်း လိုက်လံ ယူခဲ့ရသော မင်းသမီးလေး တပါးဖြစ်ခဲ့ရပါသည်။ သူမကို ထိုအချိန်က သတင်းစာများထဲ၌ သဲကန္တာရထဲမှ နှင်းဆီ ပန်းလေးတစ်ပွင့်ဟု ချစ်စနိုးခေါ်ဝေါ်ခဲ့ကြသည်။
ချစ်စရာကောင်းသော ကလေးငယ်(၃) ယောက်၏ အမေဖြစ်သော အယ်(စ)မာအာဆတ်သည် (ှSrv)ဆပ်(ဗ)ကားကို ကိုယ်တိုင်မောင်းပြီး ကလေးများနှင့်အတူ သမ္မတအိမ်တော်အတွက် လိုအပ်သော အိမ်သုံး ပစ္စည်းများကို ကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်၍ ဒီမိုကရက်တစ်ဆန်စွာ လွတ်လပ်စွာဈေးဝယ် ထွက်တတ်သော အမျိုးသမီး တစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံ တော်၏ ဧည့်သည်များဖြစ်သော နိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင်များ၊ ရှင်ဘုရင်များအတွက် လက်ဆောင်မွန်များကိုလည်း ကိုယ်တိုင်ရွေးချယ် ၀ယ်ခြမ်းပေးလေ့ ရှိသည်။ ထိုအချိန်က ဆီးရီးယားသမ္မတ ဘာရှာအာဆတ်သည် အာရပ်ကမ္ဘာတွင် အသက် အငယ်ဆုံး သမ္မတအဖြစ် ထင်ရှားခဲ့သည်။
ထိုစဉ်က သမ္မတအာဆတ် အနေနှင့် ဤမျှ တင့်တယ်၍ အရည်အချင်းရှိသော အမျိုးသမီးတစ် ယောက်ဖြစ်သော အယ်(စ)မာကို မည်သို့များ ရှာဖွေ တွေ့ရှိခဲ့သနည်းဟု စူးစမ်းခဲ့ကြသည်။ သို့သော် သူမ၏ ခင်ပွန်း သမ္မတကြီးမှ တိုင်းပြည်ကိုနှစ်(၂၀) ကြာ အာဏာရှင် ဆန်ဆန် အုပ်စိုးဖိနှိပ် လာခဲ့သောအခါ တိုင်းသူ ပြည်သားများမှ သည်းမခံနိုင်တော့ပဲ ဆန္ဒပြမှုများ ဖြစ်ပွားလာခဲ့သည်။ အာဆတ်သည် တိုင်းသူပြည်သားများ နှင့် ညှိနှိုင်းဖြေရှင်းခြင်း မပြုလုပ်ပဲ ဖမ်းဆီးချုပ်နှောင် ခြင်း ၊ လက်နက်ကြီးများနှင့် ဖြိုခွဲခြင်း များကိုပြုလုပ်လာခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် ပြည်တွင်းစစ် မီးကြီးသည် ဆီးရီးယားနိုင်ငံကို တောက်လောင် ခဲ့ရပြီး ပြည်သူ အများအ ပြား သေကြေခဲ့ကြရသည်။
ယခင်က လှပသော ထင်းရှုးတောများ ဖုံးလွှမ်းနေသော နိုင်ငံလေးမှာ သမ္မတကြီး အမိန့်နှင့် ဆန္ဒ ပြသူများကို အစုလိုက်အပြုံလိုက် လက်နက်ကြီးများ နှင့် ဖြိုခွင်းနေသောကြောင့် ပြည်သူ များသွေးမြေကျ ခဲ့ရသည်။
ကလေး(၃)ယောက် အပါအ၀င် သမ္မတကြီး နှင့် အယ်(စ)မာတို့ မိသားစုလည်း သူမတို့ ဇာတိမြို့ လေးသို့ ပုန်းရှောင် ထွက်ပြေးသွားကြပြီဖြစ်သည်။ ယခု အခါ အနောက်တိုင်း မီဒီယာများမှ သမ္မတကတော် အယ်(စ)မာကို အဘယ်ကြောင့်များ ဤမျှ ရက်စက် ကြမ်းကြုတ်သော ခင်ပွန်း (ယောက်ျား) တစ်ယောက်ကို မည်သို့သော စိတ်ထားနှင့် လက်ထပ်ဖို့ ရွေးချယ်ဆုံး ဖြတ်ခဲ့သနည်းဟု ဆန်းစစ်နေကြပြီဖြစ်သည်။
တစ်ချိန်က ရှေးဦး ခရစ်ယာန်များဖြစ်သော ဘုရားရှင်၏ တပည့်တော်ကြီးများ စိန်ပေါ(လ်)(Saul)မှ ပါလက်စတိုင်းမှသည် ဆီးရီးယားနိုင်ငံ ဒမတ်စကတ်မြို့ တော်ကြီးထိ လှည့်လည်ပြီး တရားဟော ခဲ့ကြသည်။ ကန္တာရထဲမှနှင်းဆီတစ်ပွင့်ဟုကျော်ကြားခဲ့သော သမ္မတကတော်လေး အယ်(စ)မာသည်လည်း သဲကန္တာရ တစ်နေရာသို့ ပုန်းအောင်း ပျောက်ကွယ် သွားခဲ့ရရှာသည်။
(Ref Asma al - Assad Syria's First Lady. (Newsweek March 12,2012)
Posted by Archdiocese Of Mandalay Blog at 1:38 AM
မိတ်ဆွေ လောကအလယ် မာယာကြွယ်ပြီး
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်စဉ်းစားပါ - ဘယ်လိုလူများလဲကွာ
ကိုယ်ကိုယ်ကိုပြန်စဉ်းစားပါ - ငါဘယ်လိုလူများလဲကွာ
မိတ်ဆွေ ကိုယ့်ရဲ့တံကျင် ကိုယ်မမြင်ဘဲ
Posted by Archdiocese Of Mandalay Blog at 4:17 PM
Our Lady of Perpetual Succour သို့မဟုတ် Perpetual Help ဟူ၍ လူသိများကြတဲ့ “သက်လျာပတ်လုံး မှိုင်းမတော်မူသော သခင်မ”ထံ သဒ္ဓါကြည်ညိုခြင်းဟာ ကက်သလစ် အသင်းတော်မှာ အတော်လေးရေပန်းစားနေတဲ့ ကြည်ညိုမှု တစ်ရပ် ဖြစ်ပါတယ်။ ခရစ်တော်ရဲ့ မယ်တော် မာရီယားကို အထက်ဖော်ပြပါ ဘွဲ့နာမတော်ဖြင့် ရိုသေကိုးစားမှုရဲ့ သမိုင်းနောက်ခံကတော့ မြေထဲပင်လယ်ဒေသရှိတဲ့ Crete (ခရိ)ကျွန်းမှာ ပန်းချီဆရာတစ်ယောက်က အဆိုပါ မယ်တော့် ရုပ်ပုံကားချပ်ကို ရေးဆွဲခဲ့တယ်။ သက္ကရာဇ် (၁၄)သို့မဟုတ် (၁၅)ရာစု အဖြစ်သို့ အလားအလာရှိတယ်။ ၁၄၉၅ ခုနှစ်လောက်မှာ ကုန်သည် တစ်ယောက်ဟာ ၎င်းင်းပုံတော်ကို ဂရိကျွန်းကနေ ရောမမြို့သို့ ယူဆောင်လာပြီး သူမသေခင် သူတည်းတဲ့ အိမ်က မိတ်ဆွေ တစ်ယောက်ထံအပ်၍ ဘုရားရှိခိုး ကျောင်းတစ်ကျောင်းဆောက်၍ ထိုမယ်တော့် ပုံတော်ကို ဌာပနာထားဖို့မှာ ကြားခဲ့တယ်။ မှာတဲ့အတိုင်းလုပ်ဖို့ မိတ်ဆွေက ကတိထားပေ မယ့် စိတ်ပြောင်းတဲ့အခါ အိမ်က သမီးလေးတစ်ယောက်ကို မယ်တော်က ထင်ရှားပြပြီး ပုံတော်ကှို St.Matthewခေါ် ရှင်မဿဲဘုရား ကျောင်း၌ အပ်နှံ သပ္ပါယ်ထားဖို့ရန် မှာကြားလိုက်တယ်။ ၎င်းင်းကျောင်းဟာ ရောမမြို့ရှိ နာမည်ကြီးSt.Mary Major and St. John Lateran ကျောင်းတော်ကြီးများကြားမှာ ရှိတယ်။ မယ်တော်က မိမိဟာ “အစဉ်အမြဲ ကူညီဖေးမ တော်မူတတ်သည့် သန့်ရှင်းသောမာရီယား” ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း ထိုသူ ငယ်မလေးကို ပြောကြား လိုက်တယ်။
ဤသို့ဖြင့် မတ်လ ၂၇ ရက်နေ့ ၁၄၉၉ ခုနှစ်မှာ မယ်တော့်ပုံတော်ကို ရှင်မဿဲကျောင်းတော်ရှိ ဘုရားစင် အထက်မှာ တပ်ဆင်၍ တခမ်းတနား ဂုဏ်ပြုခဲ့တယ်။ နှစ်ပေါင်း ၃၀၀နီးပါး “သက်လျာပတ်လုံး မှိုင်းမ တော်မူသောသခင်မ”ဘွဲ့ နာမဖြင့် မယ်တော်မာရီယားဟာ ၎င်းင်းကျောင်း၌ ရိုသေ ကိုးစားမှုများ ခံယူရရှိပြီး တန်ခိုး အမြောက်အများလည်းပြသ ခဲ့တယ်။ ၁၇၉၈ ခုနှစ်မှာ ပြင်သစ်စစ်တပ်ဟာ ရောမမြို့ကို ချဉ်းနင်းသိမ်းပိုက်၍ ရဟန်းမင်းကြီး အဌမမြောက်ပီအူးကို သုံ့ပန်းအ ဖြစ် ဖမ်းဆီး ယူသွားကာ ဘုရားကျောင်းတော်ပေါင်း ၃၀ ကို ဖျက်ဆီး ဖြိုခွဲ ပစ်လိုက်တယ်။ ရှင်မဿဲကျောင်းလည်း ပါသွား ရှာတယ်။ ကျောင်းမှ မထွက်ပြေးရခင် Augustinian ဂိုဏ်းဝင် ရသေ့ ဘုန်းကြီးများက မယ် တော့်ပုံချပ်တော်ကို ဖယ်ပြီး ကျောင်းငယ်လေး တစ်ခုမှာ သိမ်းခဲ့တယ်။ နှစ်ပေါင်း ၆၀ကျော်ကြာပြီးမှ Redem ptorist ဂိုဏ်းဝင်ဘုန်းကြီး Fr. Michael Marchi ရဲ့ ရှာဖွေ ကြိုးပမ်းမှုဖြင့် မယ်တော့် ပန်းချီကားချပ်ကို ပြန်လည် တွေ့ရှိပြီး ယခင်က မယ်တော့်ပုံ ဌာပနာထားတဲ့ ကျောင်းမြေကွက်ပေါ် Redemptorist သူတော်စင်များ တည်ဆောက်လိုက်တဲ့ ကျောင်းဆောင်အသစ်မှာ အပ်နှံပူဇော်၍ မယ်တော့်ကို ဆက်လက် ဂုဏ်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။ အဲတော့ အခုဆို “သက်လျာပတ်လုံး မှိုင်းမတော်မူသော သခင်မ” ရဲ့ original မူရင်းပုံတော်ကို Redem ptorist ဂိုဏ်းတည် ရဟန္တာ Alphonse ကို ဂုဏ်ပြုတဲ့ ရောမမြို့ရှိ ဘုရားကျောင်းတော်ကြီး ၌တွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်။ ပုံတော်နှင့်ပတ်သက်ပြီး သိဖွယ်ကောင်းတဲ့ အချက်အလက်ကလေးတွေကတော့ မူရင်းပုံဟာ အကျယ်အရ လက်မ အမြင့် ၂၁ ရှိ သစ်သားပြားပေါ်မှာ ရေးဆွဲထားတဲ့ ပန်းချီကားချပ်ဖြစ်တယ်။ ပုံကတော့ ဂရိ အ၀တ်အစား ဆင်မြန်း ထားကြတဲ့ မယ်တော်မာရီယား နှင့် သူငယ်တော် ပန်းချီဟာ Byzantine ခေတ်က လက်ရာဖြစ်တယ်။ ၎င်းင်းနှင့် ဆင်တူရိုးမား မယ်တော့် ရုပ်ပုံကားချပ်များကို အရှေ့တိုင်းနှင့် Russiaပြည်မှာ တွေ့ရှိရတယ်။ ဒီလိုမျိုး ပန်းချီပုံဟာ ရှင်လုကား ဆွဲခဲ့တဲံ့Hodegetriaခေါ် မယ်တော့်ပုံကို အခြေခံထားသည်ဟု ဆိုကြတယ်။ ထို Hodegetria ပုံတော်ကို သက္ကရာဇ် ၁၄၅၃ ခုနှစ်၌ Constantinople မြို့တော်ကို တူရကီတပ်များ ၀င်ရောက်၍ ဖျက်ဆီး လိုက်သည့်တိုင်အောင် ရာစုပေါင်းများစွာ ရိုသေ ကိုးကွယ်ခဲ့ကြ သည်ဟု ပြောကြတယ်။
“အစဉ် မှိုင်းမတော်မူသော သခင်မ” ပုံတော် မှာ မယ်တော်ရဲ့ ၀တ်ရုံဟာဗေဒါ အပြာရောင်၊ အတွင်း အင်္ကျီ လက်ရှည်ကအနီ ၊ခေါင်းကို ခြုံထားတဲ့ဝတ်ရုံ အောက်မှာမြင်ရတဲ့ခေါင်းစီးဟာ အဖြူကြောင်းတားထားသည့် အစိမ်းနုရောင် ၊ရွှေရောင် သရဖူအောက်၌ အဖျား ချွန် ၈ခု ရှိသော ကြယ် ၁လုံး၊ အသက် ၂နှစ် ၃နှစ် ခန့်သား အရွယ်ရှိတဲ့ သူငယ်တော်ယေဇူးရဲ့ ၀တ်ရုံကို တော့ နီဝါ၀ါ အရောင် ၊အင်္ကျီလက်ရှည်က အစိမ်း၊ သရဖူရွှေရောင်။ ပုံမှာတွေ့ရတဲ့ စာလုံးတွေဟာ ဂရိစကားလုံး များဖြစ်ကြပါတယ်။ မယ်တော့်ရဲ့ အထက် ဘေးနှစ်ဖက်မှာ “ဘုရား၏ မယ်တော်”ဆိုတဲ့ စာလုံးကို အတိုချုပ်ဖော်ပြ ထားတယ်။ မယ်တော့်ပုံရဲ့ ဘယ်ဘက်မှာ သိကြားမင်းကြီး မိုက်ကယ်လ်နှင့် သူ့ရဲ့ အမည်အတိုချုပ်ကို ညာဘက်မှာ သိကြားမင်းကြီး ဂါဗြီအဲလ်နှင့် သူ့ကိုဝန်းတဲ့ ဂရိစာလုံးများ ကို တွေ့ရပါတယ်။
သိကြားမင်း မိုက်ကယ်လ်ရဲ့ လက်ထဲမှာ တစ်နေ့ကျ အာဏာသားများ ခရစ်တော့်နှလုံးကို ထိုးဖောက်မယ့် လှံနှင့် ကိုယ်တော် ကားတိုင်ပေါ်မှာ ရေငတ်စဉ် ပုန်းရည်ကပ်ပေးရန် ရေမှို တပ်ထားသည့် အတံ။ ဂါဗြီ အဲလ် ကတော့ ကားတိုင်တော်ကို ကိုင်ထားတယ်။ သူဟာ ကယ်တင်ခြင်း သတင်းကောင်းကို မယ်တော့်ထံ ပြန်ကြားခဲ့တဲ့ တမန်တော်ဖြစ်၍ ကယ်တင်ခြင်း သတင်းကောင်းနှင့် တပါတည်း ဆက်နွယ်နေတဲ့ ကားတိုင်ကို ဆောင်ထားပါတယ်။ မယ်တော့်ရဲ့ ဘယ်ဘက် လက်ပေါ်မှာ ထည့်ထားတဲ့ သူငယ်တော် ယေဇူးလေးဟာ သိကြားတမန်တော် ဂါဗြီအဲလ် ဆောင်ယူလာတဲ့ ကားတိုင်ကိုကြည့်ပြီး ကြောက်ရွံ့ ထိတ်လန့်နေပုံ ရှိတယ်။ သူ့ ဖိနပ်တစ်ဘက်ကလည်း သဲကြိုးပြတ်ပြီး ကျွတ်ကျတော့မယ့် အခြေအနေမှာ ရှိတယ်။ မယ်တော်ဟာ သားတော်အတွက် ၀မ်းနည်းနေပုံ ပေါက်သော်လည်း သူ့မျက်လုံးများဟာ သားတော်ဘက် လှည့်နေသည် မဟုတ်၊ ပုံကို ကြည့်ရှုနေကြမည့်သူ ကျွန်ုပ်တို့ အပေါ် သနားကရုဏာ သက်ရောက်တဲ့ သဏ္ဍာန်ရှိပါတယ်။ ပုံတော်တစ်ခုလုံးရဲ့ နောက်ခံဟာ တောက်ပတဲ့ ရွှေရောင်ဖြစ်တယ်။ ဒီ “အစဉ် မှိုင်းမတော်မူသော သခင်မ” ရုပ်ပုံတော်ကားချပ်ဟာ ကျွန်ုပ်တို့အား ခရစ်တော်၏ နက်နဲဖွယ်ရာ ၃ရပ် ဖြစ်သည့် ၀မ်းမြောက် ၀မ်းသာဖွယ်ရာ၊ ၀မ်းနည်း ဖွယ်ရာနှင့် အံ့သြဖွယ်ရာ အချက်များကို ကမ္မဌာန်းရှုစေရန် ဖိတ်ခေါ်ပြီး အပြစ်ရှိသူ လူသားများအပေါ် အကြင်နာ အပြည့်အ၀ ရှိတဲ့ မယ်တော်ရဲ့ကူညီမှိုင်းမမှု၊ ဘုရားထံကြားဖြန့် တောင်းလျှောက်ပေးမှုတို့ကို အမြဲ တင်ဆက်နေပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ ဒီ “အစဉ် မှိုင်းမတော်မူသော သခင်မ” ဘွဲ့နာမအောက်၌ မယ်တော်မာရီယားကို သဒ္ဓါ ကြည်ညိုမှုဟာ ကမ္ဘာနှင့် အ၀ှမ်းပျံ့နှံ့နေသည်မှာ အံ့သြစရာ မဟုတ်ပါ။
ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ၌ Manila မြို့Baclaran အရပ်ရှိ Gedemptorist ဘုန်းတော်ကြီးများ ဦးစီးတဲ့ “အစဉ် မှိုင်းမတော်မူသော သခင်မ” ကျောင်းတော်ကြီးဟာ ကမ္ဘာမှာရှိတဲ့ ဘုရားရှိခိုးကျောင်းကြီးများ အနက် တစ်ခု အပါအ၀င်ဖြစ်၍ မယ်တော့်အား ပုံမှန်သဒ္ဓါ ကြည်ညို ကိုးစားကြသော ဘာသာဝင်ဦးရေ အများဆုံး တက်ရောက်သောကြောင့် ကမ္ဘာမှာ အကြီးဆုံး မယ်တော့်ဗိမ္မာန်ဟူ၍ လည်းခေါ်ဝေါ် နိုင်ပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဟူးနေတိုင်း မယ်တော့်အား ကြည်ညိုဝတ်ပြုခြင်းအတွက် ပုံမှန် လူ ၈သောင်း မှ ၁သိန်း အထိ လာရောက်ကြပါတယ်။
Baclaran ရှိ မယ်တော့် ဘုရားကျောင်းကြီးဟာ အလျား ၃၄၅ ပေ၊ အနံ ၁၁၈ ပေ၊ အပြင်ဘက်က အမြင့် ၇၂ပေ နီးပါးရှိပြီး ဘုရားကျောင်း တက်သူပေါင်း ၂၀၀၀ကျော်အတွက် ထိုင်စရာရှိ၍၊ ၉၀၀၀ ကျော် ရပ်ဖို့ နေရာရှိသဖြင့် ကျောင်းအတွင်း စုစုပေါင်း လူ ၁သောင်း ၂ထောင်ခန့် ၀တ်ပြု ကိုးကွယ်နိုင်ကြပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တိုင်း ၎င်းင်းကျောင်းဟာ ၂၄နာရီ ပွင့်နေပြီး သတ်မှတ်ထားသည့် အချိန် နာရီအလိုက် မစ္ဆားတရား ပူဇော်မှုများ၊ နိုဗီနာမေတ္တာ ဆိုခြင်းများ၊ သြ၀ါဒပေးခြင်း၊ ကိုယ်တော်မြတ် ကောင်းချီး ခံယူခြင်း စသည်တို့ဖြင့် ဝေဆာနေပါတယ်။ လရဲ့ ပထမ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့များမှာ ဆိုရင် ဘုရားကျောင်းတံခါး အထိ သာမက ကျောင်းဝင်း တံခါးမ ဂိတ်ဝကြီး အထိ လူတွေ လျှံထွက်နေတာကို တွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။
Baclaran ရှိ “အစဉ် မှိုင်းမတော်မူသော သခင်မ” ရုပ်ပုံတော်ကို ßGedemptorist သူတော်စင် ဂိုဏ်းဝင် ဘုန်းတော်ကြီးများက ၁၉၀၆ ခုနှစ်မှာ ဖိလစ်ပိုင်သို့ သယ်ဆောင် လာကြပါတယ်။ ၎င်း ပုံဟာ ရောမမြို့ရှိ original မူလပုံတော်နှင့် တထေရာတည်း တူအောင် ပြုလုပ်ရုံမက ၎င်းင်းပုံတော် အစစ်နှင့် ထိထားပြီး မင်္ဂလာ ရထားတဲ့ ပုံချပ်ဖြစ်ပါတယ်။
ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး ဒုတိယမြောက် ဂျွန်ပေါလ်ဟာ မယ်တော့်ကို အထူး ချစ်ကြည်ညို မြတ်နိုးသူဖြစ်၍ Cardinal ခေါ် ရဟန်းအမတ် အဖြစ် ၁၉၇၃ ခုနှစ်၌ Australia သို့ အသွား Manila မြို့၌ လေယာဉ် ခေတ္တ ရပ်နားစဉ် မမျှော်လင့်ဘဲ Bacleran ဘုရားကျောင်းမှာ မစ္ဆားတရား ဟောခွင့်ရခဲ့တယ်။ ရဟန်းမင်းကြီး ဖြစ်သွားပြီး ၁၉၈၁ ခုနှစ် February ၌ Manila သို့ သာသနာ့ ခရီးလှည့်စဉ် သူတော်စင် ရဟန်းများ၊ သီလရှင်များနှင့် တွေ့ဆုံဖို့ ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး ဒုတိယမြောက် ဂျွန်ပေါလ်ဟာ ၎င်းင်း “အစဉ် မှိုင်းမတော်မူသော သခင်မ” ကျောင်းတော်ကြီးကို ရွေးချယ် ခဲ့ပါတယ်။
(Gef: The New Cath. Encyclopedia, vol.10 1967,USA+ßGVA ßGesearch Sheets.)
Posted by Archdiocese Of Mandalay Blog at 8:32 PM
ပြီးခဲ့တဲ့ သိုးထိန်းသံ အမှတ်စဉ်(၈၃) (ခရစ်တော်ဘုရားရှင်ရဲ့သင်္ချိုင်းဂူ) မှာ ဖြေကြားပေးခဲ့တဲ့ ခရစ်တော်ဘုရားရှင်ရဲ့ အုတ်ဂူ သင်္ချိုင်းဟာ အိန္ဒိယ နိုင်ငံ ကက်ရ်ှမီးယားမှာ ရှိတယ်ဆိုတဲ့ အမေးနဲ့ပက်သက်ပြီး၊ မဟုတ် မမှန်ကြောင်းကို ဆက်လက်ဖြေကြားပေး သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဦးစွာ ပထမ-ခရစ်တော်သည် ကက်ရ်ှမီးယားမှာ မူဆလင်ဘ၀ နဲ့အသက် (၁၂၀) ထိနေခဲ့တယ် ဆိုတဲ့ အချက်ကို မှားယွင်းနေကြောင်း သမိုင်း အထောက်အထားနဲ့ အဖြေပေးချင်ပါတယ်။ အသက်(၁၂၀)အထိ မူဆလင်ဘ၀နဲ့ ရှင်သန်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်က တော့ အေဒီ(၁၂၀) အထိ အသက်ရှင်ခဲ့တယ်လို့ ဆိုလိုခြင်းဖြစ်တယ်။ မူဆလင်ဘ၀နဲ့ အေဒီ(၁၂၀)ထိ ရှင်သန်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ အချက်ဟာ သမိုင်းအရ မှားယွင်း နေပါတယ်။ မူဆလင်ဘာသာကို တည်ထောင်သူ ပ ရောဖက် မူဟာမက်အေဒီ(၅၇၀)ခုနှစ် ပတ်ဝန်းကျင် မှာမွေးဖွားခဲ့ပြီး မူဆလင်ဘာသာ ဟာအေဒီ (၆၁၀)ခုနှစ်မှာ မက္ကာမြို့မှ အစပြုခဲ့ ကြောင်း အစ္စလာမ် သမိုင်းအရ သိရှိရပါတယ်။ ခရစ်တော် ဘုရားရှင်ဟာ အေဒီ (၁၂၀) ခုနှစ်ထိ ရှင်သန်ခဲ့အုံးတော့ ကမ္ဘာပေါ်မှာ မူဆလင်များ မရှိသေးပါ။ အစ္စလာမ်ဘာသာ မပေါ် ပေါက် ခဲ့သေးပါ။ ပရောဖက် မူဟာမက်သည်ပင် လျှင် ကမ္ဘာပေါ်မှာ မမွေးဖွားခဲ့သေးပါ။ ထွင်ဇာတ်ဖြစ် ကြောင်း ပေါ်လွင်နေပါတယ်။ အခု တစ်ဖန် ခရစ်တော် ဘုရားရှင်နဲ့ ခရစ်တော်ဘုရားရှင်ရဲ့ အုတ်ဂူသင်္ချိုင်း အစစ်အမှန် တည်ရှိရာနေရာကို သမိုင်းအထောက် အထားများနဲ့ ဆက်လက်ပြီး တင်ပြပေးပါမယ်။
ခရစ်တော် ဘုရားရှင်နဲ့ ပတ်သက်လာပြီ ဆိုရင် ကျွန်ုပ်တို့ ခရစ်ယာန်တွေက သမ္မာကျမ်းချက်တွေနဲ့ လှည့်ပတ်ပြီး သက်သေပြလေ့ ရှိပါတယ်။ မှန်လည်းမှန် ပါသည်။ သမ္မာ ကျမ်းစာတော်မြတ်ဟာ ဘုရားရှင်ရဲ့ နှုတ်ကပတ် တရားတော်ဖြစ်သလို၊ ကယ်တင်ခြင်း သမိုင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ခရစ်တော် ဘုရားရှင်ကို ယုံကြည် သက်ဝင်ကြတဲ့ ခရစ်ယာန်တွေအတွက်တော့ ပြဿနာ မရှိပါဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် ခရစ်ယာန် တွေက ယုံကြည် လက်ခံထားတဲ့ အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ခရစ်ယာန် မဟုတ်သော အခြားဘာသာကို ယုံကြည် သက်ဝင်သူများအတွက်တော့ သမ္မာ ကျမ်းချက်နဲ့ ထောက်ပြ သက်သေပြတာကို လက်ခံနိုင်သူ ရှိသလို၊ လက်မခံနိုင်သူတွေလည်း ရှိပါတယ်။ ဒီကနေ့ ခရစ်တော် ဘုရားရှုင်ဟာ ဒဏ္ဍာရီထဲက ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘဲ တကယ်ရှိခဲ့တဲ့ သမိုင်းဝင် ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ပါး ဆိုတာကို ခရစ်ယာန် မဟုတ်တဲ့ နာမည်ကြီး သမိုင်းရေးဆရာကြီး Flavius Josephus ရေးသားတဲ့ History of the Jewish War နဲ့ Antiquitties of the Jews လို့ အမည်ရတဲ့ သမိုင်း စာအုပ်နှစ်အုပ်မှ သမိုင်း အထောက် အထားတွေနဲ့ ကောက်နုတ် တင်ပြပေးချင်ပါတယ်။ အဲ့ဒီ သမိုင်း စာအုပ်နှစ်အုပ်ကို ဦးစွာ Aramaic ဘာသာ စကားနဲ့ရေးသားခဲ့ပြီး ဂရိဘာသာစကားနဲ့ လည်းရေးသား ခဲ့ပါတယ်။ ဒီလို အတင်ကရ နာမည်ကြီး ဂျူးသမိုင်း ရေးဆရာကြီးရဲ့ အထ္ထုပတ္တိသမိုင်း အကျဉ်းချုပ်ကို ဦးစွာဖော်ပြပေးပါမယ်။ သူ့ရဲ့ ရာဇ၀င်ကိုသိမှ သူရဲ့အ ရေးအသားဟာ ဘယ်အတိုင်းအတာ အထိ ခိုင်လုံတယ်။ စိတ်ချရတယ်ဆိုတာ သိရမှာဖြစ် ပါတယ်။
ဂျူးသမိုင်းဆရာကြီး Flavius Josephus ဟာ အေဒီ ၃၇ခုနှစ်မှာ မွေးဖွားခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ သူရဲ့ မွေးရပ်ဇာတိကတော့၊ အစ္စရေးပြည်ဂျေရုစလင်မြို့ ဖြစ်ပါတယ်။ Flavius Josephus သည် ပထမ ရာစုနှစ်မှာ အထင်ကရ နာမည်အကျော်ဆုံး သမိုင်းဆရာကြီး တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ အေဒီ ၆၆ခုနှစ်မှ ၇၃ခုနှစ် အထိ ရောမ အစိုးရကို တော်လှန်ခဲ့တဲ့နေရာမှာ ရှေ့တန်းက ပါဝင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ ဂျူးသမိုင်းရေး ဆရာကြီးFlavius Josephus ဟာ ဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့ ယဇ် ပုရောဟိတ် မျိုးနွယ်နဲ့ ဘုရင်အမျိုးနွယ်မှ ဆင်းသက် လာသူဖြစ်ပါ တယ်။ ဒီသမိုင်းရေး ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရဲ့ ဂျုး နာမည်စစ်စစ် က တော့ Joseph ben Mathias ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်လို လုပ်ပြီး ရောမနာမည်ကို ခံယူခဲ့တာလည်း ဆိုရင် သူ ဟာဂါလီလေ နယ်စားစော်ဘွား ဖြစ်ခဲ့ပါတယ် ။အေဒီ ၆၆ ခုနှစ်မှာ ရောမအစိုးရကို သူကိုယ်တိုင် ဦးဆောင်ပြီး တော်လှန်ရေး ဆင်နွှဲခဲ့ပါတယ်။ရောမတွေရဲ့ Vespasian စစ်တပ်ကနေ ရက် သတ္တပတ် ၇ ရက်တိတိ အ၀ိုင်းခံလိုက်ရတော့ လက်နက်ချ အရှုံးပေးခဲ့ရပါတယ်။ Vespasian ဘုရင်ဖြစ်လာတော့ သူဟာ မျက် နှာရသူဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် Flavian ဆိုတဲ့ ရောမ နာမည်ကိုပါ မိမိကိုယ်ကို မှည့်ခေါ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဂျူးသမိုင်းရေးဆရာကြီး Flavius Josephus ဟာ ဂျူး လူမျိုးတွေရဲ့ လောကတွင် သာမက ရောမတစ်ခွင်မှာပင် နာမည်ကျော် ဂျူး သမိုင်းရေး ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအဖြစ် လူသိများ ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ သူဟာ ခရစ်တော်ဘုရားရှင်ကို ယုံကြည် သက်ဝင်သူ ခရစ်ယာန် မဟုတ်တဲ့ အတွက် သူ့ရဲ့ သမိုင်းအရေးအသားများ ကလည်း သမ္မာ ကျမ်းစာ အပြင်ဘက်နေ ခရစ်တော်ဘုရားရှင်နဲ့ ခရစ် တော်ရှင်ရဲ့ သာသနာတော်အတွက် ခိုင်လုံမှု တစ်ရပ်ကို ပေးထားတဲ့ အရေးအသား တစ်ရပ်ဖြစ်နေ ပါတယ်။ သူရဲ့သမိုင်း အရေးအသားများကိုလည်း လေ့လာဖို့ လွယ်ကူရအောင်ဆိုပြီး ပညာရှင်များက အခန်းကြီး အခန်းငယ်များကို ခွဲခြားပေးထားတာကို တွေ့ရပါတယ်။
ဥပမာ Antiquities of the Jews “ဂျူးလူမျိုး တို့၏ ရှေးခေတ်တွင်ပေါ်ထွန်း ခဲ့သည့် ပညာရှင်များ သမိုင်း” အခန်းကြီး ၁၈၊ အခန်းငယ် ၃ မှ တတိယမြောက် အပိုဒ်ထဲမှာ သမိုင်းသွင်း ထားချက်ကတော့ “ဉာဏ် ပညာ အမျှော်အမြင်နှင့် ပြည့်စုံသောယေဇူးဟု အမည်တွင်သော ပုဂ္ဂိုလ် တစ်ပါးပေါ်ထွန်း ခဲ့သည်။ သူသည် အံ့ဖွယ် တန်ခိုး အမျိုးမျိုးကို ပြတော်မူခဲ့သူဖြစ်သည်။ သူ၏ သွန်သင်ချက်များ၌ သစ္စာ သမ္မာတရားနှင့် နှစ်သိမ့်အားရမှုများကို ရရှိကြသဖြင့် များစွာသော ဂျုးလူမျိုးများနှင့် တကွ၊ ဂျူးလူမျိုး မဟုတ်သော လူမျိုးခြားများကိုပင် ဆွဲဆောင်နိုင် ခဲ့သူဖြစ်သည်။ သူသည် ခရစ်တော်ဖြစ်သည်။ ပီလာတူးမင်းသည် လူထု၏ အကြံပြုချက် အတိုင်း လက်ဝါးကားတိုင်း၌ သူ့အား တင်သတ်ခဲ့သည်။ သူ့အား ဦးစွာ ချစ်မြတ်နိုးကြသော ပုဂ္ဂိုလ်များသည် သူ့အား စွန့်ပယ်မှု မပြုကြပေ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် သူသည် တတိယမြောက်သောနေ့၌ သေခြင်းမှ တစ်ဖန် ပြန်လည် ရှင်ပြန် ထမြောက်တော်မူပြီး သူတို့အား မိမိ ကိုယ်ကို ထင်ရှားပြတော်မူခြင်းကြောင့် တစ်ချက်၊ ပရောဖက်များ၏ သူနှင့် ပတ်သက်သော အနာဂတ္တိ စကားများ ဟောကြားထားခြင်းကြောင့် တစ်သွယ်၊ သူ ကိုယ်တိုင်ပြုခဲ့သော တန်းခိုး အာနုဘော်တော်များ ကြောင့် ပင်ဖြစ်သည်။ သူ၏နောက်လိုက်များသည် မိမိတို့ကိုယ်ကို မိမိတို့ ခရစ်ယာန်များဟုပင် ယနေ့ထိတိုင် ခေါ်ဝေါ်ကြသည်” လို့ လေ့လာ မှတ်သားရ ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ သမိုင်း အရေးအသားထဲမှာ ခရစ်တော်နဲ့ ပက်သက်ပြီး ရေးသားမှု၊ သမိုင်းသွင်းမှုတွေပါရှိပြီး ခရစ်တော်သည် အိန္ဒိယပြည်သို့ သွားသည်။ တိဗက်ပြည်သို့ သွားသည် ဟူ၍ သမိုင်းသွင်းရေးသားထားမှု မရှိပါ။ ထိုရာဇ၀င်များသည် နောက်ပိုင်းမှ ထွင်လာသော ရာဇ၀င်များသာဖြစ်ပါသည်။ အခုတစ်ဖန် ခရစ်တော်ရှင်ရဲ့ အုတ်ဂူသင်္ချိုင်းနဲ့ ပက်သက်ပြီး၊ ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ၊ လာဟောမြို့တော်မှ၊ ဘုန်းတော်ကြီး အိနိူင်းယသ်ဘားနတ်ရဲ့ လေ့လာ တင်ပြ ဖြေထားချက်ကို၊ ၁၉၈၅ခုနှစ် သြဂုတ်လ (၁၈)ရက်နေ့ ထုတ် ပါကစ္စတန်နိုင်ငံရဲ့ တတိယ အကြီးဆုံးမြို့ ဖြစ်တဲ့ ဖက်ဆီလ်အာဘတ်မြို့မှ ထုတ်ဝေတဲ့ လစဉ်ထုတ် “သာလာရှ်” မဂ္ဂဇင်းစာအုပ်ထဲက “စပါယ်ရှယ်ယေဇူး နံဘာ” လို့အမည်ရတဲ့ ဖြေကြားချက်ကို အခြေခံပြီးဖော်ပြပေးပါမယ်။ ပထမအချက် ကတော့ ဟေရုဒ်မင်းကြီး လိုက်လံသတ်ခဲ့လို့ ကလေးဘ၀နဲ့ အီဂျစ်ပြည်သို့ ပြေးခဲ့ရတဲ့ ဘ၀က လွှဲရင် ခရစ်တော်ဘုရားရှင်ဟာ ပါလက်စတိုင်း နိုင်ငံအပြင်ဘက်ကို တစ်ခါမျှ ခရီး မထွက်ခဲ့ဘူးပါ။
ရှင်မာတေဦး ဧ၀ံဂလိကျမ်း ၂၇း ၅၇-၅၈ ထဲမှာ “ညနေချိန်ရောက်လျှင် ယေဇူး၏ တပည့်တစ်ဦး ဖြစ်သည့် အာရီမာတေးယမြို့သား ဂျိုးဇက်အမည်ရှိ ချမ်းသာကြွယ်ဝသူ တစ်ဦးရောက်လာလေ၏။ သူသည် ပီလာတူးမင်း ထံသို့ သွားပြီးလျှင် သခင်ယေဇူး၏ အလောင်းတော် ကိုတောင်းလေ၏ ထိုအခါ ပီလာတူးမင်းက၊ အလောင်းတော်ကို သူ့အားပေးရန် အမိန့်ချ လိုက်လေ၏”တဲ့။
ရှင်ယောဟန် ဧ၀ံဂလိကျမ်း (၁၉း ၃၉-၄၀) ထဲမှာ “သခင်ယေဇူး ထံတော်သို့ ညချိန်တွင် လာသော နီကောဒေးမူးသည်လည်း မီးရာနှင့် မုတ်ရောထား သော၊ ဆီမွှေး နံသာပေါင်း အချိန်တစ်ရာခန့်ကို ယူ ဆောင် လာလေ၏။ သူတို့သည်လည်းယေဇူး၏ အ လောင်းတော်ကို ယူဆောင် လာပြီးလျှင် ဂျူးလူမျိုး တို့၏ သဂြိုလ်ခြင်း နှင့် ဆိုင်သော၊ ဓလေ့ ထုံးစံ အတိုင်း၊ နံ့သာမျိုးများနှင့် အတူ ပိတ်အ၀တ်ဖြင့် ပတ်ရစ်ကြ၏” တဲ့။ (ရှင်မာတေဦး ဧ၀ံဂေလိကျမ်း ၂၇း ၅၉-၆၀) “ဂျိုးဇက် သည် အလောင်းတော်ကို ယူဆောင်၍၊ ဖြူစင်သော ပိတ်အ၀တ်ဖြင့် ပတ်ရစ်ပြီးကျောက်ဆောင်တွင် ထွင်းထားသော မိမိ ပိုင်ဆိုင်သည့် သင်္ချိုင်းဂူ အသစ်၌ ကိုယ် တော်၏ အလောင်းတော်ကို သွင်းထားလေ၏။ ထို နောက် သူသည် သင်္ချိုင်းတွင်း အ၀၌ ကြီးမားသော ကျောက်တုံး တစ်တုံးကို လှိမ့်၍ ပိတ်ထားခဲ့ပြီးမှ ထွက်ခွါ သွားလေ၏။”
စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ အချက်ကတော့ ဂျူး ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များ၊ ဖာရီဇေဦးများဟာ ခရစ် တော်ယေဇူး ဘုရားရှင်ရဲ့ ဘွဲ့နာမတော်ကို ဒီကမ္ဘာလောကကြီးထဲ ကနေ ချေဖျက်ပစ်ဖို့ အတွက် ရောမဘုရင်ထံ ချဉ်းကပ်ပြီးတော့ သူဟာ တတိယမြောက် တဲ့နေ့မှာ ပြန်လည် ရှင်ပြန် ထမြောက်မယ်လို့ သူကိုယ်တိုင် ပြောခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့် အဲဒီသင်္ချိုင်းကို အစောင့်အကြပ် ထားဖို့ တောင်းခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့် သင်္ချိုင်းဂူကို အ စောင့်ချ ထားခဲ့ပါတယ်။
ရှင်မာတေဦး ဧ၀ံဂလိကျမ်း ၂၇း၆၆ “ထို ကြောင့် သူတို့သည်လည်း သွားကြ၍ကျောက်တုံးကို တံဆိပ်ခပ်နှိပ်ကာ အစောင့်များ ချထားကြလျက် သင်္ချိုင်းဂူကို လုံခြုံ အောင်စောင့်ကြပ်စေကြ၏။ ဘုရားတန်ခိုးတော်နဲ့ပြန်ရှင် ထမြောက်တော်မူခြင်းကိုပင် အစောင့်အကြပ်တွေ ကိုငွေပေးပြီးနှုတ် ပိတ်ခဲ့ကြတာကိုပင် ရှင်မာတေဦး ဧ၀ံဂေလိကျမ်း ၂၈း၁၁-၁၅ ထဲမှာ လေ့လာ ဖတ်ရှုရပါတယ်။ ဘယ်လိုပဲ သူတို့နှုတ်ပိတ် ပိတ် ဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့ ယဇ်ပုရောဟိတ်နဲ့ မင်းမျိုး မင်း နွယ်ဖြစ်တဲ့ သူတို့ရဲ့ မျိုးရိုးနွယ်ဖွားဖြစ်တဲ့ သမိုင်း ဆရာကြီး Flavius Josephus ကတော့ သူ့ရဲ့ သမိုင်း အရေးအသားထဲမှာ တတိယမြောက်တဲ့နေ့ မှာသေ ခြင်းမှ တစ်ဖန်ပြန်လည် ရှင်ပြန် ထမြောက်ပြီး မိမိ၏ တပည့်တော်များကို ကိုယ် ထင်ရှားပြတဲ့အကြောင်း များကို သမိုင်းသွင်းဖော်ပြ ထားပါတယ်။
ခရစ်တော်ရှင်ရဲ့ ဂူသင်္ချိုင်း အစစ်အမှန်ရဲ့ ရာဇ၀င် သမိုင်းအကျဉ်းချုပ်ကို ခုနှစ် သက္ကရာဇ်များဖြင့် ဆက်လက်ပြီးလေ့လာကြမယ် ဆိုရင် ခရစ်တော် ဘုရားရှင်ရဲ့ အလောင်းတော်မြှုပ်နှံရာ သင်္ချိုင်းဂူဟာ ခြေရာ လက်ရာမပျက် နဂိုရှိရင်း အတိုင်းဂျေရုဇလင်မြို့မှာ ယနေ့ထိတိုင် တည်ရှိနေပါတယ်။ ကြည်ညို လေးမြတ်ခြင်း အပြည့်အ၀နဲ့ ထိန်းသိမ်းထားပါတယ်။ သမိုင်း ခုနှစ်ကာလများ အလိုက် ဆက်လက်ပြီး ဖော်ပြ ပေးပါမည်။အေဒီ ၃၀ ခုနှစ်မှ အေဒီ ၇၀ခုနှစ် ကာလအတွင်း အစောပိုင်းကာလ ခရစ်ယာန်များဟာ ဂျူးလူမျိုး တွေရဲ့ ညှဉ်းပမ်းနှိပ်စက်ခြင်းကို ခံနေကြရချိန်ဖြစ်ပေမယ့် တက်ကြွတဲ့ ခရစ်ယာန်အဖွဲ့အစည်းလေး တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ် ။အေဒီ ၄၃ခုနှစ် မှာဟေရုဒ်အာဂရိပတ် ဘုရင် ဟာဂျေရုဇလင်မြို့ရိုးကို တိုးချဲ့ ပစ်လိုက်တဲ့အတွက်၊ ခရစ်တော်ရှင် အသက်စွန့်ရာ ကာလ၀ါရီတောင် တော်နဲ့၊ အလောင်းတော်မြုပ်နှံသဂြိုလ်ရာ ဂူသင်္ချိုင်းဟာ ၊ဂျေရုဇလင်မြို့တော်အပြင်ဖက် မဟုတ်တော့ပဲ၊ မြို့တွင်းဖြစ် သွားပါတော့တယ်။
အေဒီ ၇၀ ခုနှစ်မှအေဒီ ၁၃၄ခုနှစ် ကာလ အ တောအတွင်းမှာတော့ ၊ရောမ အင်ပါယာရဲ့နေရိုး ဘုရင်ဟာ၊ ဂျေရုဇလင် မြို့တော်နဲ့ ဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့ ဂျေရုဇလင်ဘုရား ဗိမာန်တော်ကြီးကို ဖျက်ဆီး ပစ်ခဲ့ပါ တော့တယ်။ ဒီလို ဖျက်ဆီးနေတဲ့ ကာလမှာ လူနည်းစုလာက်သာ မြို့တွင်းမှာ ကျန်ခဲ့ကြပါတယ်။ အများစုက တော့ အသက် ဘေးမှ လွတ်မြောက်ဖို့အတွက် ထွက်ပြေး တိမ်းရှောင် ခဲ့ကြရပါတယ်။ ဒီလို ဆိုးရွား လှတဲ့အခြေအနေမှာပင် ခရစ်ယာန်များဟာ ခရစ် တော်ရှင်မြုပ်နှံခဲ့ရာနဲ့ သုံးရက်မြောက် တဲ့နေ့ သေခြင်းမှပြန်လည် ရှင်သန်ထ မြောက်တော်မူခဲ့ရာ ဂူသင်္ချိုင်းသို့ ဘုရားဖူး သွားရောက်ခဲ့ကြတာကို သမိုင်းထဲမှာ ဖော်ပြထားတာကို လေ့လာ သိရှိခဲ့ရပါတယ်။ သမိုင်း အရဆိုလျှင်၊ အဲဒီလိုခေတ် ကာလမှာပင် ဘုရားဖူးများ လာရောက်ခဲ့ကြလို့၊ အချို့ သော ပုဂ္ဂိုလ်များဟာ၊ ခရစ်တော်ရှင်ရဲ့ သင်္ချိုင်းဂူ အနီးအနားမှာ၊ စီးပွားဖြစ် တည်းခိုခန်းများကို ဆောက်လုပ်ခဲ့ကြတယ် လို့လည်းဂျေရုဇလင်မြို့ရဲ့ သမိုင်းကဏ္ဍမှာရေးသား ထားတာကိုလည်း မှတ်သားရပြန်ပါတယ်။
ခရစ်သက္ကရာဇ်အေဒီ ၁၃၅ ခုနှစ်မှအေဒီ ၃၂၄ ခုနှစ် ကာလ အတောအတွင်းမှာတော့ ဂျူးလူမျိုး တွေရဲ့ တော်လှန် ပုန်ကန်ခြင်းပြီး ချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို တော်လှန်လို့ အပြီး မှာတော့ရောမ အင်ပါယာရဲ့ ဧကရာဇ်ဘုရင် Hadrian ဟာ ဂျေရုဇလင်မြို့တော်ကို ပြန်လည် တည်ဆောက်ခဲ့ပြီး၊ ခရစ်တော်ရှင်ရဲ့ သင်္ချိုင်းဂူကို ခြံရံလျက် Cupid လို့ခေါ်တဲ့ ရောမလူမျိုးတွေရဲ့ ဖူး စာရေးနတ်ကလေးရဲ့ ရုပ်ထု၊ မြန်မာလို အခေါ်ကတော့ ဖူးစာနတ် မျှားနတ်မောင် ရုပ်ထုနဲ့၊ Venus နတ်ဘုရား ရုပ်ထုနှစ်ဆူတို့ကို တည်ထား ကိုးကွယ်စေခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီနေရာမှာပဲ လုံးခြမ်းပုံ အခုံးကြီးပါတဲ့ခေါင်မိုးနဲ့ အ ဆောက်အဦး ဗိမာန်ကြီးကိုလည်း ဆောက်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီ ဗိမာန်တော်ကြီးရဲ့တောင်ဖက်ခြမ်း ခပ်ယွန်းယွန်းမှာတော့ လူထု အတွက်ဈေးကြီးကို တည် ဆောက်ပေး ခဲ့ပါတယ်။ ဘာကြောင့် ဒီလို နတ်ဘုရား ရုပ်နှစ်ဆူကို တည်ထားရခြင်း၊ ကြီးမား လှတဲ့ဈေးကြီးနဲ့ အဆောက်အဦး ဗိမာန်ကြီးကို တည်ဆောက်ရခြင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သမိုင်း ကဖော်ပြထားပြန်ပုံကတော့၊ ရောမ ဧကရာဇ်ဘုရင် Hadrian ဟာ ခရစ်တော်ရဲ့ သင်္ချိုင်းဂူသို့ လူတွေ တစ်ဖွဲဖွဲနဲ့ သွားရောက် ဆုတောင်းကြတာကို မနှစ်ခြိုက်၍ ဒီလို နတ်ဘုရား ရုပ်ပွားများနဲ့ ဗိမာန် အဆောက်အအုံ ၊ဈေးတို့ကိုဆောက်လုပ်ပြီး ခရစ်တော်ရဲ့ သင်္ချိုင်းကို ဆီးကာ ပိတ်ဆို့ လိုက်ဖို့ဖြစ်တယ်လို့ သမိုင်းမှာ ထပ်မံပြီး လေ့လာရပြန်တယ်။ ဘယ်လို ကာရံမှုတွေပြုပြု ခရစ်တော်ဘုရားရှင်ကို ယုံကြည် သက်ဝင်သူ ခရစ်ယာန်တွေအတွက်တော့ မရရ နိုင်တဲ့နည်းနဲ့ အရောက်သွားခဲ့ကြပြီး သဒ္ဒါ ကြည်ညို လေးမြတ်မှုကို ပြုခဲ့ကြပါတယ်။
ခရစ်သက္ကရာဇ် ၃၂၅ ခုနှစ် မှ ၆၁၃ ခုနှစ် အတွင်းမှာတော့ ကွန်စတန်တင် ဧကရာဇ်ဘုရင်ကနေ ခရစ်ယာန် ဘာသာကို ရောမ အင်ပါယာကြီး တစ်ခုလုံးရဲ့ တရားဝင်နိုင်ငံတော် ဘာသာအဖြစ် ကြေညာပေးခဲ့ပါတယ်။ ဧကရာဇ်ဘုရင့်ရဲ့ မယ်တော်ဖြစ်သူ ဟဲန်လဲန်နားဟာ ပါလက်စတိုင်း တစ်ခွင်ကို လှည့်လည်ခဲ့ပြီး အထူးသဖြင့် ခရစ်တော်ဘုရားရှင်ရဲ့ အသက်တော်စွန့် ရာကာလ၀ါရီတောင်နဲ့ ခရစ်တော်ရှင်ရဲ့ သင်္ချိုင်းဂူတို့ကို နဂိုမူရင်း အခြေအနေသို့ပြန်ရောက်သည့်တိုင်အောင် စွမ်းဆောင် ကြိုးပမ်းခဲ့ပါတယ်။ ကွန်စတန်တင် ဧကရာဇ်ဘုရင်ကနေ ဘုရားဖူးဌာန အဖြစ် မွမ်းမံမှုများ ပြုလုပ်နိုင်ရန် အမိန့်တော် ချမှတ်လျက် တိုင်းသူပြည်သားများကိုပင် ပုံမှန် ဘုရားဖူး သွားရောက်နိုင်ကြရန် အားပေး အားမြောက်မှုများပြုခဲ့ကြောင်း သမိုင်းကိုလေ့လာ သိရှိရပါသည်။ ကွန်စတန်တင် ဧကရာဇ်ဘုရင်ရဲ့ အမိန့်တော် အတိုင်း၊ ကာလ၀ါရီတောင်နှင့် ဂူသင်္ချိုင်းကို ငုံ၍ တစ်စပ်တည်း ဘုရားရှိခိုးကျောင်း ဗိမာန်တော်ကြီးကို တည်ထားဆောက် လုပ်စေခဲ့ပါသည်။ အဲဒီ ဘုရားရှိခိုးကျောင်း ဗိမာန်တော်ကြီးကို သခင်ဘုရား သေခြင်းမှပြန်လည် ရှင်ပြန် ထမြောက်တော်မူသည့် ဘုရားရှိခိုးကျောင်းတော်လို့ ဘွဲ့ နာမခေါ်ထွင်စေခဲ့ပါတယ်။ အေဒီ ၄၂၀ ခုနှစ်မှာတော့ ခရစ်တော်ရှင်ရဲ့ ဂူသင်္ချိုင်း အပေါ် တည့်တည့်မှာ လုံးခြမ်းပုံ ရှိခေါင်အမိုး ခုံး ကြီးကို ဆောက်လုပ်ခဲ့ကြောင်း သမိုင်းမှတ်တမ်းက ဖော်ပြထားပါတယ်။
အေဒီ ၆၁၂ခုနှစ် မှ အေဒီ ၁၁၄၀ ခုနှစ်အတွင်း မှာတော့၊ ပါရှန်ဘုရင်များဟာ ခရစ်တော် သင်္ချိုင်းဂူ အနီးနား တစ်ဝိုက်ရှိ အဆောက်အအုံများကို ဖျက်ဆီးခဲ့ရာ ခရစ်တော်ရှင်ရဲ့ ဂူသင်္ချိုင်းကို ငုံ၍ဆောက်ထားသော ဗိမာန်တော်ကြီးလည်း အနည်းငယ် ဖျက်ဆီးခြင်း ခံခဲ့ရပါတယ်။ သို့သော် မူရင်းပုံ မပျက် ရှိခဲ့ပါတယ်။ အေဒီ ၁၁၄၀ခုနှစ် မှအေဒီ ၁၈၀၈ခုနှစ် အတွင်းမှာတော့၊ အထူးသဖြင့် ခရူးဆိတ်ဘာသာရေး စစ်ပွဲကာလအတွင်းမှာ ၊ ၁၂၄၄ခုနှစ်မှာ တစ်ကြိမ်၊ ၁၃၁၀ခုနှစ်မှာ တစ်ကြိမ်၊ ၁၄၀၀ခုနှစ်မှာ တစ်ကြိမ်၊ ၁၇၀၉ခုနှစ်မှာ တစ်ကြိမ် (၆)ကြိမ်တိတိ ဘုရားကျောင်း ဗိမာန်တော်ကြီးဟာ ဖျက်ဆီးခြင်း ခံရပေမယ့် ခရစ်တော်ရှင်ရဲ့ ဂူ သင်္ချိုင်းတော်ဟာ ပျက်စီးခြင်း မရှိ၊ နဂိုမူရင်း အတိုင်း ရှိခဲ့တယ်လို့ သမိုင်းမှာလေ့လာရပြန်ပါတယ်။ ခရစ် သက္ကရာဇ် ၁၈၀၈ခုနှစ်မှ ၂၀၁၂ခုနှစ် အတွင်း သမိုင်းလေ့လာချက် အရကတော့ ခရစ်တော်ဘုရားရှင်ရဲ့ ဂူသင်္ချိုင်း အပေါ် တည့်တည့်မှာ တည်ထားတဲ့ လခြမ်းပုံ ရှိခေါင်မိုး အခုံးကြီးဟာ၊ အကြိမ်ကြိမ် မီးလောင်မှုများ ရှိခဲ့သလို အကြိမ်ကြိမ်ပြန်လည်ပြင်ဆင်မှု များပြုခဲ့တယ်လို့ လေ့လာသိ ရှိရပါတယ်။ ခရစ်တော်ရှင်ရဲ့ တပည့်သာဝက တမန် တော်များ လက်ထက်မှသည် ယနေ့ထိတိုင် ခရစ်ယာန်များ တစ်ဖွဲဖွဲ ဘုရားဖူး ထွက်ခဲ့ကြပါတယ်။ ခရစ်တော် ဘုရားရှင်ရဲ့ ဂူသင်္ချိုင်းဟာ အိန္ဒိယနိုင်ငံ ကက်ရ်ှမီးယားနယ်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ဂျေရုစလင်မြို့မှာ သာဖြစ် ကြောင်း သမိုင်း အထောက်အထား၊ ခုနှစ် အထောက် အထားများနဲ့ ဖြေကြား လိုက်ရပါတယ်။ မျက်မှောက် ခေတ် ဘုရားဖူးစာရင်းများကို ရူလိုက်ပါက သန်းပေါင်း များစွာ ဆိုတာ သိရပါတယ်။
ဘုန်းတော်ကြီး ဒိုမိနစ် ဦးဂြိုလ်တု
Posted by Archdiocese Of Mandalay Blog at 1:53 AM
All Saints Day လို့ ပြောတဲ့ “ရဟန္တာအ ပေါင်းပွဲ”ကို နိုဝင်ဘာလမှာ ကျင်းပကြပါတယ်။ ဒီပွဲကို ကျင်းပရခြင်းရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ အသင်းတော်ထဲမှာ အထင်ကရ ရဟန္တာတွေ အများကြီးရှိပြီး သူတို့ရဲ့ ပွဲရက်အတိုင်း ဘာသာဝင်များက ပွဲကျင်းပတယ်။ ကြည်ညိုလေးစားမှု၊ သဒ္ဓါကြည်ညိုမှု ကိုပြ ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လို့ ရဟန္တာတွေက များစွာရှိတော့ ရဟန္တာတစ်ပါးစီတိုင်းကို ရက်သတ်မှတ်ပေးဖို့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် အသင်းတော်ကလည်း လူသိ ထင်ရှားမဟုတ်တဲ့ ရဟန္တာတွေ၊ လူတွေ မသိပေမယ့်လို့ ဘုရားသခင်သာသိတဲ့ ရဟန္တာပေါင်းများစွာနဲ့ နေ့စဉ် ပိုမိုများ ပြားလာတဲ့ ရဟန္တာ အားလုံးကို သတိရ ဂုဏ်ပြုဖို့နဲ့ သူတို့ရဲ့ ကူညီစောင့်ရှောက်မှုနဲ့ ဆုတောင်းပေးမှုကို တောင်းခံဖို့ “ရဟန္တာအပေါင်းပွဲ”ကို အေဒီ. . . ၈၀၀က တည်းက နိုဝင်ဘာလ ၁ ရက်နေ့မှာ ကျင်းပစေခဲ့တာ ယနေ့ထိ ပါပဲ။
ဒီပွဲ ကျင်းပခြင်းရဲ့ နောက်အကြောင်းအရင်း တစ်ခုကတော့ လောကမှာ အသက်ရှင်နေထိုင် ကြတဲ့သူ များ၊ လူ့ရဲ့ အားနည်းချက်တွေ၊ စုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းတွေ၊ ညှင်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းတွေ ကြားကနေ ခရစ်တော်အား နောက်ဆုံး တိုင်အောင် သစ္စာရှိ သွားရန် အားပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနေ့ ကျင်းပတဲ့ ရဟန္တာတချို့ဟာ ကျွန်တော်တို့ သိခဲ့တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တယ်။ ကျွန်တော်တို့နဲ့ အတူ ကျွန်တော်တို့ အလယ်မှာ နေထိုင်သွားတယ်။ ကျွန် တော်တို့လိုပဲ သူတို့ရဲ့နေ့စဉ် ဘ၀အသက်တာမှာ တစ်ခါတစ်ရံ ကျဆုံးတာတွေလည်း ရှိခဲ့တာပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ဘုရားသခင်ရဲ့ ကူညီစောင်မမှုနဲ့ သူတို့ရဲ့ ၀ိညာဉ်ရေး၊ ဘာသာရေး အသက်တာကို အဆုံးထိအောင်လျှောက်လှမ်းနိုင်ခဲ့ကြသူ များဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနေ့ သူတို့က ကောင်းကင်ကနေပြီး ကျွန် တော်တို့ကိုပြောနေတဲ့ သတင်းစကားကတော့ “မ ကြောက် ကြနဲ့၊ စိတ်ဓာတ် မကျနဲ့။ ငါတို့ဟာလည်း မင်း တို့လိုပဲ အပြစ်ရှိခဲ့တဲ့၊ အားနည်းခဲ့တဲ့ သူတွေပါ။ ဒါ တောင်မှ ဘုရားရဲ့ တန်ခိုးတော်နဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာတော် အားဖြင့်တို့ဟာ ကယ်တင်ခြင်း ခံခဲ့ရတယ်။ ဆက်လက် ရုန်းကန် တွန်းလှန်ပါ။ ငါတို့က ကောင်းကင်ဘုံကနေ ဘုရားသခင်ဆီကို မင်းတို့အတွက် ဆုတောင်းပေးရင်း၊ မင်းတို့ကို ကူညီနေပါတယ်။ အံ့သြစရာကောင်း လောက်တဲ့ ဆုကျေးဇူး၊ ဆုလဒ်ဟာ မင်းတို့အတွက် ဒီ နေရာမှာ အဆင်သင့် ရှိနေပါတယ်”
ကျွန်တော်တို့ လောကထဲမှာ အသက်ရှင်နေတဲ့ အချိန် တစ်ဦးနဲ့ တစ်ဦးက မတူညီကြတာ ရှုထောင့် မျိုးစုံဖြစ်ပါတယ်။ တချို့က စိုက်ပျိုးရေးလုပ်တယ်။ တချို့ကတော့ ကုန်သည်၊ တချို့က အစိုးရ အမှုထမ်း၊ တချို့ကျ တော့ ငယ်သေးပေမယ့် အသက်အရွယ်ကြီးတဲ့ လူတွေလည်း များစွာ ရှိနေပါတယ်။ အိမ်ထောင်သည်တွေလည်း ရှိသလို၊ လူလွတ်တွေလည်း များစွာရှိပါတယ်။ ဒီလို တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် မတူပေမယ့်လို့ ခရစ်ယာန်တွေမှာ တူညီတဲ့ အချက်တစ်ခုရှိပါတယ်။ ဒါက တော့ အားလုံးဟာ သန့်ရှင်းမွန်မြတ်တဲ့သူဖြစ်ဖို့၊ တစ်နည်းအားဖြင့်ပြောရရင် လူသားအားလုံးဟာ ရဟန္တာ ဖြစ်ဖို့ ခေါ်တော်မူခြင်း ခံရပါတယ်ဆိုတဲ့ အချက်ပါပဲ။
ကျွန်တော်တို့ အားလုံးက “ဟ - ငါလို လူက ရဟန္တာဖြစ်မလား၊ သန့်ရှင်းမြင့်မြတ်နိုင် ပါ့မလား” လို့ စောဒက တက်၊ မေးခွန်း ထုတ်ကြပါလိမ့်မယ်။
အဖြေကတော့ ကျွန်တော်တို့ ဖြစ်နိုင်ရုံ တင်မကဘူး။ ဖြစ်ကိုလည်းဖြစ်ရပါမယ်။ ကောင်းကင် ထာဝရ သုခ ချမ်းသာ၌ ဘုရားရှင်၏ ဘ၀ အသက်တာတွင် ပါဝင်ဝေမျှရန် သန့်ရှင်းမြင့်မြတ်သူ (သို့) ရဟန္တာဖြစ်ရန် ဆိုတဲ့ အချက်အတွက် ဘုရားသခင်ကလောကထဲတွင် ကျွန်တော်တို့ကိုထား တာဖြစ်ပါတယ်။ အရှင် သူတော်မြတ်၊ ရဟန္တာအပေါင်းပွဲ ကျင်းပနေချိန် အဲဒီ ပုဂ္ဂိုလ်တော်မြတ်တွေဟာ ဘာကြောင့်၊ ဘယ် ပါရမီကြောင့်၊ သူတော်မြတ် ရဟန္တာများဖြစ် သွားကြတာလဲဆိုရင် “ခရစ်တော်ဟောခဲ့တဲ့ မင်္ဂလာ” တရားတော်ကြောင့် ပါပဲလို့ ဖြေရ ပါလိမ့်မယ်။ ဒီတရား တော်ဟာ ခရစ်ယာန် တရားတော်ရဲ့ အနှစ်သာရ သို့မဟုတ် ဓမ္မအမြုတေ ဖြစ်ပါတယ်။
တစ်နည်းပြောရမယ် ဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်တို့ ပွဲကျင်းပတဲ့ ရဟန္တာတွေက ကျွန်တော်တို့ လူသား တွေဟာလည်း ရဟန္တာအဖြစ်ကို ရရှိအောင် ကြိုးစားကြဖို့ ဘုရားသခင်က အလိုရှိတယ်။ သတ်မှတ် ထားတယ်။ ခေါ်ထားတယ်ဆိုတဲ့ အချက်ကို သတိပေးနေပါတယ်။ ဆိုလိုတာက ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဘ၀အသက်တာဟာ သေပြီးတဲ့ အခါမှာ ထာဝရသုခ ချမ်းသာကို ခံစားရရှိမယ်ဆိုတဲ့ အခြေအနေမျိုး၊ ဘ၀ အသက်တာမျိုးနဲ့ နေထိုင် အသက်ရှင်ရမယ်ဆိုတဲ့ အချက်ကို သတိပေး ခြင်းပင်ဖြစ်ပါတယ်။